O iwe anofara-manotsi uye unyorera zvekudhinda nekuraira
O iwe anofara-manotsi uye unyore
O iwe anofara-mavara
Sheet music and text O iwe anofara
O iwe anofara, oh wakaropafadzwa,
Nyasha yeKrisimasi nguva!
Nyika yakarasika, Kristu akaberekwa.
Fara, fara, iwe chiKristudhomu!
Kristu akazviratidza kuti atidzikinure:
Mauto okudenga anofara mukukudzwa.
Vhura zvinyorwa zverwiyo rwaKrisimasi O iwe unofara sefaira